‘कांग्रेस र फोरमले हामीलाई चुनावमा आउन दिएनन्’
मंगलवार, आश्विन २, २०७५
मदिराका कारण मलेशियामा चार नेपालीको मृत्यु
‘रूख काट्दा ध्यान देऊ तर विमानस्थल बनाऊ’
बच्चाको लागि म हिटलर: अभिनेत्री काजोल
अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध!
कामै नगर्नेलाई आठ पुल !
संविधान दिवसमा कालो, रातो, सेतो दिन हुंदैनः उपेन्द्र यादव
दुई दशकपछि ऋषि कपुर र जूही चावलाको जोडी फिल्ममा देखिंदै
कान्तिपुर डेन्टल कलेज र आन्दोलनरत विद्यार्थीबीच सहमति
मोक ट्रेडिङ् शुरु, अनलाइन ट्रेडिङ् दुई महीनाभित्र
४० सेकेन्ड चार्ज गर्दा ३० मिनेट चल्ने ‘ग्यालेक्सी नोट–९’
नेपाली मुद्रा किन कमजोर ?
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सम्पन्न, सचिवालयको पुनर्संरचना गर्ने तयारी
बाजुराका पाँच बेसहारा बालबालिकालाई एसओएसले संरक्षण गर्ने
कहिले होला 'माग्नेहरु' को व्यवस्थापन ?
प्रदूषण नियन्त्रणमा समन्वय र सुशासनको अभाव
शेयर बजार झिनो अंकले ओरालो
सरकारले चिनी आयातमा कोटा तोक्यो
अन्तर्वार्ता/विचारआइतवार, आषाढ ४, २०७४
हाम्रो मतभेद वा असन्तुष्टि संविधान जारी भएको बेलादेखिको हो । पटक पटकको वार्ता परिणाममुखी हुन नसकेपछि पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं ।
अर्को त स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई आधार बनाइएन । बालानन्द पौडेल आयोगले दुई निष्कर्ष दिएको छ । पहिलो, आयोगले ११ जिल्लामा काम गर्न सकेन, सहमति भएन । दोस्रो, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्रमा प्रवेश नै गरेन । यी दुवै विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ भनेका थियौं । हामी ५१ प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशतमा झर्न तयार भयौं । त्यस अनुसार २२ हजारमा एउटा गाउँपालिका र ३२ हजारमा नगरपालिका कायम गर्ने भनियो । त्यस अनुसार स्थानीय तह निर्धारण गर्न स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले ११ जिविसमा सर्कुलर जारी गरे । दोस्रो दिन एमालेले मानेन भनेर सरकारले स्थगित गर्यो । फेरि विजय गच्छदार स्थानीय विकास मन्त्री भएपछि सरकारले २२ वटा स्थानीयतह थप्ने निर्णय गर्यो । तर सर्वोच्च अदालतले रोक्यो ।
सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा पुग्यो भन्ने पनि यथार्थ होइन । वास्तविकता के हो भने ७ देखि ९ जना कर्मचारीले स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने अवस्था छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई समन्वयकारीको भूमिका मात्रै दिइएको छ । यो त सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको होइन, गाउँलाई पनि सिंहदरबारले कब्जामा लिएको हो ।
शहीद घोषणा पूर्णरुपमा हुनसकेको छैन । सैद्धान्तिक रुपमा मुद्दा फिर्ताको निर्णय सरकारले गरिसकेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । घाइतेको उपचार पुष्पकमल दाहालको पालामा केही अगाडि बढ्यो । यी सबै विषयलाई सम्बोधन नगरेसम्म राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था छैन ।
यो निर्वाचनमा राजपाले भाग लिन नपाओस् भन्ने खेल भइरहेको छ । भित्री नियत राजपाले निर्वाचनमा भाग नलेओस् भन्ने नै छ । खासगरी नेपाली कांग्रेस र केही मधेशवादी दललाई राजपाले भाग नलिंदा फाइदा हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । राजपा त्यही षडयन्त्रको शिकार भएको हो । राजपाले निर्वाचनमा भाग लिनै नपाओस् भन्ने ‘ग्य्राण्ड डिजाइन’ कतै न कतै बनेको हुनुपर्छ ।
तराई मधेशमा जुन ढंगले सेना परिचालन गरिएको छ यसले सुरक्षाकर्मीकै बलमा निर्वाचन गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारको यही सोच रह्यो भने मूठभेडको स्थिति आउन सक्छ । काठमाडौंले नयाँ मधेशलाई चिन्न सकेन । काठमाडौं र मधेशबीचको दूरी झन् अगाडि बढेको छ । पृथकतावादीहरू एकाएक निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् । चुनावमा भाग लिनुस् मत चाहिं बाहिर हाल्नुस् भनिरहेका छन् । हामी निर्वाचनका लागि तत्पर छौं तर ढोकाहरू बन्द गरिएका छन् ।
मंगलवार, आश्विन २, २०७५ रूसी जासुसी विमानमा आक्रमण, १५ को मृत्यु
मंगलवार, आश्विन २, २०७५ बालविवाह रोक्न बालिका बीमा
मंगलवार, आश्विन २, २०७५ तत्काल पूरक बजेट आउँदैनः अर्थमन्त्री
मंगलवार, आश्विन २, २०७५ मदिराका कारण मलेशियामा चार नेपालीको मृत्यु
टिप्पणी नेपाली मुद्रा किन कमजोर ?
रिपोर्ट प्रदूषण नियन्त्रणमा समन्वय र सुशासनको अभाव
ब्लग गोमालाई बिजुली ट्रली
मंगलवार, आश्विन २, २०७५ दुई दशकपछि ऋषि कपुर र जूही चावलाको जोडी फिल्ममा देखिंदै
सोमवार, आश्विन १, २०७५ राजनीतिदेखि डर लाग्छ: आमिर खान
आइतवार, भाद्र ३१, २०७५ अनुराग कश्यप, एउटा फिल्मले बदल्यो जसको जीवन